80 sqm + wifi garaji Old Cableway 008055-LT-0828
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Flavio
U-Flavio Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elingu-80sqm, kanye negalaji langasese elingu-16sqm, i-wifi yamahhala, ekhanya kakhulu, enkabeni yedolobha. eduze Via Matteotti, Casino 'nolwandle.Kuhlinzekwa ngamashidi, amathawula nezinto zangasese. Ukushisa okuzenzakalelayo. Ukuze senze ukuhlala kwezivakashi zethu kuphephe, sihlanza kahle futhi sibulala amagciwane kulo lonke ifulethi okuhlanganisa izibambo, amaswishi, isilawuli kude, isiphanyeko sezingubo nokunye. Umsebenzi wenziwa ngaphambi kokungena ngakunye.
Imibhede emibili ephindwe kabili, usofa umbhede ongu-1 no-1/2 wesikwele kanye nombhede wengane. Ikhishi elinohhavini, i-microwave, umshini wekhofi we-pod, iketela, umenzi wekhofi kanye netiye. Ukunikezwa kokuqala kwama-waffles, ushukela, ikhofi, amanzi, ubisi, ipasta.Intengo ihlanganisa ilineni lombhede namathawula kanye nokuhlanza okokugcina. Ngokuhlala isikhathi esingaphezu kwesonto kufakwe nokushintshwa kwelineni. Intela yabavakashi ayifakiwe, efinyelela kuma-euro angu-1.5 ngosuku umuntu ngamunye, isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezi-5. Izingane ezifika eminyakeni eyi-13 azifakiwe. Ulwazi esizeni esivamile se-sanremo.
4.97 ·68 okushiwo abanye
4.97 · 68 okushiwo abanye
Eduze kwefulethi kunemakethe yezithelo / yemifino emboziwe kanye nemikhiqizo ejwayelekile okufanele ukuvakashelwa, idolobha elidala (elingavakashelwa ngezinyawo kuphela), i-Casino, i-Via Matteotti, isonto laseRussia kanye ne-Impertrice promenade ne- amabhishi.. NgoLwesibili nangeMigqibelo imakethe yasemgwaqweni evulekile isuka ku-8 kuya ku-13. Ulwandle, olunesihlabathi, amatshe amatshe noma amabhishi angamamitha angaba ngu-600 uma uhamba ngezinyawo. Futhi kumamitha angu-600, ukuqashwa kwamabhayisikili / orisho ukuze bakwazi ukunyathela endleleni yamabhayisikili amade angu-24, elandela ukwakheka kukajantshi omdala, okuhlanganisa namahubhu. Iyasikisela kakhulu njengoba ihamba onqenqemeni lolwandle. Kukhona ithuba lokuma ezindaweni ezingazodwa lapho ungabhukuda khona futhi ushise ilanga ngokuthula. Ungaphuthelwa i-Old Bussana, idolobha "lesipoki" elashiywa ngemuva kokuzamazama komhlaba okunamandla futhi manje eligcwele abaculi.
ukungena kusuka ngo-3 kuye ku-8pm. Ukuphuma kusuka ngo-8 kuya ku-10.
Ngemithethonqubo yokuphepha komphakathi zonke izihambeli, okuhlanganisa nezingane, kufanele zethule idokhumenti. Lapho usungenile, kuyodingeka ukusayinwa kwenkontileka yezivakashi. Ifeksi yenkontileka ingacelwa ukuthi ibukwe.
Ngesikhathi sokuhlala ukutholakala kocingo ngezidingo noma izimo eziphuthumayo.
Ngemithethonqubo yokuphepha komphakathi zonke izihambeli, okuhlanganisa nezingane, kufanele zethule idokhu…
UFlavio Ungumbungazi ovelele